Iminyaka engama-271 eyadlulayo kukho incwadi elingana nesikhokelo sombala wePantone | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iminyaka engama-271 ngaphambi kwePantone, igcisa elixubileyo laza lachaza yonke imibala onokucinga ngayo encwadini
I-Pantone izibeke kwindawo entle ukuchongwa kombala, ukuthelekisa kunye nenkqubo yonxibelelwano kubugcisa begraphic. Inkqubo yayo yenkcazo ye-chromatic yeyona yamkelwe ngoku. Imowudi yombala ihlala ibizwa ngokuba ngumbala oqinileyo, ngokungafaniyo neendlela ze-CMYK kunye ne-RGB.
Ngo-1692 igcisa elalaziwa njengo «A. UBoogert 'wahlala phantsi wabhala incwadi ngesiDatshi malunga nokudibanisa iicolorcolors. Ayizukuyiqala nje incwadi ngethiyori ngokusetyenziswa kombala kupeyinti, kodwa wachaza indlela yokwenza imibala ethile kunye nokutshintsha imibala ngokongeza inxenye, ezimbini okanye ezintathu zamanzi.
Isandi sivakala silula, kodwa imveliso yokugqibela imnandi nje kwiinkcukacha zayo kunye nolwandiso. Malunga namaphepha angama-800 abhaliweyo aza apeyintwa ngokupheleleyo ngesandla, Traité des couleurs mkhonzi kwi la peinture kwi l'eau, isenokuba sesona sikhokelo sigqibeleleyo sokupeyinta kunye nokufaka imibala ngexesha laso.
Ngokombhali-mbali wexesha eliphakathi u-Erik Kwakkel, owayephethe ukuguqulela inxalenye yesingeniso, incwadi yemibala yenziwe injongo yokuba sisikhokelo semfundo. Isimanga kukuba bekukho ikopi enye ekusenokwenzeka ukuba yabonwa ngamehlo ambalwa.
Kunzima ukungathelekisi eyakho amakhulu amaphepha ombala kwinto elingana nayo ngoku, Isikhokelo sombala wePantone, esingakhange sipapashwe okokuqala kude kube ngo-1963.
Yonke incwadi inokuba kujongwa kwisisombululo esiphakamileyo kweli qhagamshelo, kwaye ungayifunda inkcazo kuyo le enye. Incwadi ngoku i-Bibliothèque Méjanes e-Aix-en-Provence, eFransi. Umsebenzi wexabiso elingenakubalwa ngokwexabiso lawo njengoko ikopi enye kwaye, njengoko benditshilo, ngeenjongo zayo zemfundo, yabonwa kuphela ngabantu abambalwa. Namhlanje oku kutshintshile ukubulela kwi-Intanethi.
Ukusuka apha Unokufikelela kwikhathalogu ye-Intanethi yePantone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iminyaka engama-271 ngaphambi kwePantone, igcisa elixubileyo laza lachaza yonke imibala onokucinga ngayo encwadini
Umenzi wefonti wakunceda wenze iifonti yakho kwi-Illustrator